Mooshinku waa ka madax bannaan yahay qaab, laakiin foomamku ma ka madax bannaanaan karaan mooshin. — T.
MOODE waa muujinta miyirka.
Ujeedada mooshinku waa in kor loogu qaado walaxda miyirka.
Dhaqdhaqaaqa ayaa sabab u ah in miyirku noqdo mid miyir qaba.
Mooshin la'aan mooyee wax isbeddel ah ma jiri karo.
Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa waligiis lama garan karo dareenka jidheed.
Mooshinku waa sharciga xakameynaya dhaqdhaqaaqa dhammaan jirka.
Dhaqdhaqaaqa jirka waa natiijada ujeedada dhaqdhaqaaqa.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyadu waxay asal ahaan ka soo jeedaan hal sabab oo aan jirin, dhaqdhaqaaq weligeed ah.
Ilaah ayaa lagu muujiyaa dhaqdhaqaaqa, iyo in qofku ku noolaado oo dhaqdhaqaaqo oo lagu sii noolaado ilaahay - oo ah dhaqdhaqaaq - jidh ahaan iyo ruux ahaanba. Waa dhaqdhaqaaq lagu farxo jirka jir ahaaneed, wuxuu hayaa wax walbaa inuu socdo, oo wuxuu ku dhiiri galiyaa atom kasta inuu qabto shaqadiisa fulinta fulinta qorshaha ugu fiican ee muujinta.
Waxaa jira mooshin sababaya atomka inuu dhaqaaqo. Waxaa jira mooshin sababaya iyaga inay koox isugu yimaadaan oo ay u sameeyaan sidii molikali. Waxaa jira mooshin ka bilaabaya jeermiga nolosha gudahiisa, jabaya foomka molikulalka isla markaana sii ballaaranaya oo u dhisaya qaab dhismeedka unugyada khudradda. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo uruurinaya unugyada, oo iyaga siiya jiho kale oo u beddelaya unugyada xayawaanka iyo xubnaha. Waxaa jira mooshin kaas oo daraasad ku sameynaya, aqoonsanaya, oo shaqsigana gaaraya. Waxaa jira mooshin dib u habeeya, isku dubaridaya, isla markaana isku waafaqaya arrinta. Waxaa jira mooshin kaas oo mideeya oo ku xallinaya waxkasta xaaladdiisa hore - walax ahaan.
Iyada oo loo marayo toddobo dhaqaaq oo taariikhda adduunka, adduunka, iyo aadanaha ah, ayaa haddana mar labaad iyo mar kale lagu celiyaa nafta aadanaha inta lagu gudajiro wareegga jirkiisa. Dhaqdhaqaaqyadaasi waxay muujinayaan naftooda: markii laga soo toosayo wakhtigiisa nasashada ee jannada-adduunyada nafta waalidka; isbeddelada gobolada qadiyada iyadoo lala xiriirinaayo mowjadaha shucuurta bini aadamka iyo waalidiinta oo ah ineey siiyaan jirkiisa jirka; ku-tallaalladeeda iyada oo loo marayo geedi socodka looga baahan yahay dhismaha jirkiisa jir ahaaneed; dhalashada jidhka jidhka adduun iyo jiritaankiisa gudaha; rajooyinka, cabsida, jacaylka, nacaybka, nacaybka, himilooyinka, iyo dagaalka lagula jiro shay inta lagu jiro adduunyada jidhka iyo geerida jidhka jidhka ka hor; Joojinta jidhka jidhku markuu dhinto iyo marinka adduunka astroodka ah; iyo soo laabashada nasashada jaakadaha qalbiga waalidka- ilaa ay ka xorreysay mowduucyada iyada oo la fulinayo sharciyadooda iyo in la dhigo, waqti walba, kalsooni buuxda oo miyir qabo wax walba.
Toddobo qoddobo oo ka mid ah waxyaabaha asal u ah asal-dhiska ayaa sababa muuqaalka iyo lumitaanka caalamka, adduunka, iyo ragga. Iyada oo loo marayo toddobada ujeeddooyinka oo dhan muujinta ayaa leh bilowgeeda iyo dhammaadkiisa, laga soo bilaabo nuxurka ruuxiga ee xagga hoose ee wareega wareegga illaa qaababka guud ee ugu weyn, ka dibna ku soo noqoshada korka kore ee wareegiisa wareegga uguna sarreeya ee fahamka ruuxiga ah. Toddobadaas mowduuc waa: is-mooshinka, mooshinka oo dhan, mooshin isku-duuban, mooshin centrifugal ah, mooshin aan caadi ahayn, mooshin xarun, falanqeeyn dhaqdhaqaaq. Sida dhaqdhaqaaqyadan ay uga dhex shaqeeyaan gudaha iyo taranka dadka, sidoo kale, oo leh cabbir ballaaran, ma waxay ka shaqeeyaan gudaha iyo gudaha adduunka. Laakiin ma fahmi karno codsigooda guud ilaa aan marka ugu horeysa ee aan garowsanno oo aan qaddarinno ficilkooda iyo xiriirkooda la xiriira dhismaha loogu yeero nin.
Dhaqdhaqaaqa waa jiritaanka miyir-qabka welwelka oo dhan. Waa wax aan macquul ahayn, weligeed ah, oo salka ku haya, sabab u-ekaanta muujinta. Is-dhaqdhaqaaqa waa dhaqdhaqaaqa iskiis u dhaqdhaqaaqa oo dhiirigeliya dhaqdhaqaaqyada kale. Waa udub dhexaadka dhaqdhaqaaqyada kale, oo isku dheellitiran, waana muujinta ugu sareysa ee miyirka iyada oo loo marayo maaddada iyo walxaha. Dhanka dadka, bartamaha dhaqdhaqaaqa iskiis ayaa ugu sarreysa madaxa. Meesha ficilkeedu ka sarreeyo iyo qaybta sare ee jirka.
Dhaqdhaqaaqa Guud waa mooshinka aan caddeynku soo muuqaneynin. Waa dhaqdhaqaaqa u beddela walaxda maaddada-maaddada iyo waxa ruuxa ku jira. Dhanka dadka, xaruntu waa banaanka iyo korka jirka, laakiin dhaqdhaqaaqa wuxuu taabanayaa dusha sare ee madaxa.
Dhaqdhaqaaqa Sunta waa archetypal ama dhaqdhaqaaq ku habboon oo wax waliba si kumeel gaar ah ugu xiran yihiin. Mooshinkaan wuxuu soo jiitey naqshadeynta wuxuuna siinayaa jihada arin ku saabsan gunaanadkeeda, sidoo kale wuxuu habeeya arrimaha inta lagu gudajiro aragtidiisa. Xarunta dhaqdhaqaaqa isku-buuqa jirka kuma eka jirka, laakiin mooshinku wuxuu ku shaqeeyaa dhinaca midig ee qaybta kore ee madaxa iyo gacanta midig.
Mooshinka Centrifugal waxkasta waxay ka dhex wadaan xarunteeda ilaa wareeggeeda gudaheeda ficilkeeda. Waxay kicisaa oo ku khasbeysaa dhammaan ashyaarta koritaanka iyo ballaarinta. Xarunta dhexe ee dhaqdhaqaaqa centrifugal waa calaacasha gacanta midig. Maqaarka ficilkiisa jirka bini-aadamka wuxuu maraa dhinaca midig ee madaxa iyo jirridda jirka iyo qeyb ka mid ah bidix, xagal yar oo madaxa ah ilaa sare ee miskaha.
Dhaqdhaqaaqa Joogtada ah ilaaliyaa foomka iyada oo si ku meel gaadh ah loo hayo iyo isku dheellitirka dhaqdhaqaaqyada centrifugal iyo centripetal. Dhaqdhaqaaqaani wuxuu kujiraa meel ballaaran ama jir ka kooban walxaha. Sida iftiinka qorraxda oo ku soo qulqulaya qol mugdi ah ayaa qaab u yeelanaya walxaha badan ee haddii kale aan la arki karin, laakiin u muuqda hiigsi markay ka gudbayaan xadka raajada, sidaa daraadeed mooshinka taagan wuxuu isku-dheellitiraa oo u oggolaanaya inuu noqdo mid muuqda is-dhexgalka dhex-dhexaadka iyo xarunta dhexe. dhaqdhaqaaqyo qaab cad ah, oo u habeeya qaanso kasta sida ku xusan naqshadeynta ay ka muuqato dhaqdhaqaaq isku dhafan. Dhanka dadka, xarunta dhaqdhaqaaqa taagan waa udub dhexaadka jirka jir toosan oo duulimaadeeduna ku yaal gudaha iyo hareeraha jirka oo dhan.
Codsiga Centripetal wax walba waxay ka soo jiidaneysaa duruufteeda xarunta ilaa iyo inta ay ku sugan tahay ficilkeeda. Way qandaraassanaan doontaa, wargelin doontaa, oo waxay ka maqnaan doontaa wax kasta oo ku dhaca meesheeda, laakiin waxaa xakameynaya centrifugal oo isu dheellitiraya dhaqdhaqaaqyada taagan. Xarunta dhexe ee dhaqdhaqaaqa bartamaha waa timirta gacanta bidix. Maqaarka ficilkiisa jirka wuxuu maraa dhinaca bidix ee madaxa iyo garka jirka iyo qeyb ka mid ah dhinaca midigta, xagal yar oo madaxa ah ilaa sare ee miskaha.
Dhaqdhaqaaqa Falanqaynta galaa, falanqeeyaa, oo mawduuca buuxiyaa. Waxay siisaa aqoonsi arrin, iyo shaqsiyad sameysasho. Xarunta falanqaynta falanqaynta jirka kuma jirto jirka, laakiin waxay mooshinku ku socotaa dhinaca bidix ee qaybta sare ee madaxa iyo gacanta bidix.
Dhaqdhaqaaqa qofku wuxuu keenaa in mowqifka caalamiga ahi uu beddelo shey aan loo baahnayn oo loo beddelo arrin jinni ah, iyo in dhaqdhaqaaqa qofku iskiis u horseedo in dhaqdhaqaaq isku dhafan la siiyo si loo hago loona habeeyo si waafaqsan qorshaha caalamiga ah, waana dhaqdhaqaaq iskiis ah oo markale ka dhigaya centrifugal iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada kale ee markooda waxay qabtaan howlahooda gaarka ah iyo howlahooda gaarka ah.
Mid kasta oo ka mid ah himilooyinku waa kujiraan ficilkiisa, laakiin dhaqdhaqaaq kastaa wuxuu xidhayaa nafta adduunkeeda illaa iyo inta hirarkeedu sarreeyo, wuxuuna abuuri doonaa xiriirinno cusub silsilada oo nafta ku xidha garabka guurka. Dhaqdhaqaaqa kaliya ee nafta ka xorayn doona garabka dib-u-dhalashada waa is-mooshin, rabbaani ah. Rabbaaniga, dhaqdhaqaaqa qofku, waa wadada xoreynta, wadada loo maro xukunka, iyo cafiska ugu dambeya -miyir.